Förintelsen iyo Dagaalkii Labaad ee Adduunka | Forum för levande historia
Förintelsen iyo Dagaalkii Labaad ee Adduunka
Jarmalka xilligii 1930-kii
Fikradaha ah inay jiraan dad kala duduwan "qoomiyado"
Qaxoontiga Yuduudda iyo Novemberpogromen Yuhuudda ayaanay waddamada kale qaabilin
Dagaalkii Labaad ee Adduunka iyo Förintelsen
Xerayaha Maxaabiista ee Naasiyiinta Koncentrationsläger iyo xeryaha shaqada
Dagaalkii Aasiya iyo Yurub
Dhammaadkii dagaalkii labaad ee adduunka ka dib
Förintelsen waa tusaale ka mid ah waxyaabaha ku cabsi galinaaya ee dhici kara haddii aynaan si joogto ah uga hadlin dimuquraadiyadda iyo sinnaanta aadanaha.
Muxuu ahaa Förintelsen
Xasuuqii Yuhuudda loo geystey intii uu Dagaalkii Labaad ee Adduunku socday ayaa loogu magac daray Förintelsen. Waxa magaca ugu wacan in taliskii Naasiyiintu uu si nidaamsan uga shaqeeyey sidii loo cidhibtiri lahaa dhamaan Yuhuudda Yurub. Xasuuqii dadka Yuhuudda ee Naasiyiinta iyo kuwii la socday ay u geysteen ayaa lagu diley ilaa 6 milyan oo Yuhuud ah. Waxa uu xasuuqu dhacaayey intii uu socday Dagaalkii Labaad ee Adduunku 1939–1945. Waxa sidoo kale dadka reer Roma loo geystay xasuuq, taas ayay sabab u aheyd fikradaha ay Naasiyiintu qabeen ee aheyd inay jiraan "qoomiyadaha aadanaha". Waxa ay Naasiyiintu sidoo kale dhibaatayn, u geysteen, xidhxidheen oo ay laayeen kumanaan qof oo tusaale ahaan ahaa qaar siyaasad ahaan ka soo horjeeda, khaniisiinta ama waxa loo yaqaan "dadka xidhxidhan ee gooni u socodka ah".
Xaqiiq ahaan marnaba ma fududa in la tilmaamo doorarka kala duwanaa ee dadka ama xukuumadaha dalalku ay ka ciyaareen dhacdo taariikhi ah. Förintelsen ayaan taas ka duwanayn. Iyadoo laga duulaayo doorarka kala duwan ayaa waxa laga yaaba inaynu wax ka barano sida ay u adag tahay in la tilmaamo dadka midba meesha uu kaga jiro. Doorarka badanaa loo isticmaalo si loogu eego ficillada dadka iyo waddamada ee khuseeya Förintelsen ayaa ah dambiileyaal, dhibaneyaal iyo daawadeyaal.
Dembiile – macnahiisu waa "qof galay nooc faldembiyeed ah". Arrinta khuseysa Förintelsen, ayay Naasiyiintu ahaayeen cidda ka dambeysay xasuuqa, dambiileyaal. Laakiin may aheyn kuwa kaligood sameeyey Förintelsen ama fuliyay dhammaan kadeedista/dhibaataynta iyo dilka. Xukuumadaha ka dhisan waddamada kale ee Yuhuudda iyo qawmiyadda dadka reer Roma laayey ama u direy xeryaha lagu soo ururiyey iyo kaamamaka dabargoynta ee caawinaayey Naasiyiinta ayaa sidoo kale dambiilayaal ahaa. Shakhsiyaad gaar ah ayaa sidoo kale noqon kara dambiilayaal.
Dhibbaneyaasha – waxa uu micnahiisu yahay in qof ama dad loo geystey dabogal ama rabshado. Ereyga dhibbane waxa uu yeelan karaa macnaha ah inaanay wax iska caabin ah oo ku wajahan dembiilayaashu jirin taas oo aan run ahayn. Dad ka tirsan qowmiyadaha Yuhuudda iyo reer Roma ayaa dhibbane u ahaa dilkii Naasiyiinta iyo kuwii caawinaayey. Naasiyiintu sidoo kale waxay dileen kooxo ay ka mid yihiin kuwa siyaasadda ka soo horjeeda, khaniisiinta, Markhaatiyaasha Yehowah, iyo dadka naafada ah.
Daawadeyaasha - daawade waa qof wax dhibki arkaaya ama daawanaaya isla markaana aan waxba ka qaban. Waxa ay noqon karaan shakhsiyaad ama xukuumado ka jira waddamo. Sababaha aanay daawadeyaashu waxba u sameynin ayaa kala duwanaan kara. Waxay noqon kartaa cabsi ama inaanay dan ka laheyn, ama sababo kale awgood. Laakiin dad badan oo daawadayaal ka ahaa Naasiyiintii Jermalka ayaa si uun ugu lug lahaa Förintelsen, tusaale ahaan, shaqadooda ama iibsiga guri ay Yuhuuddu lahaayeen laakiin ay Naasiyiintii la wareegeen.
Waxay Naasiyiintu doonayeen inay dabar gooyaan dhamaan wax kasta oo Yuhuud ah
Naasiyiintu waxay doonayeen inay dabar gooyaan dhammaan Yuhuudda iyo dhaqankoodaba. Waxa sidaas darteed loogu yeedhaa xasuuq ummadeed. Dagaalkii Labaad ee Dunidu waxa uu suurto geliyay in xasuuqu socdo muddo dheer oo ilaa lix sano ah. Antisemitism waa eray wadareed loo adeegsado nacaybka iyo cadaawadda Yuhuudda loo qabo kaas oo boqolaal sano Yurub ka jiray. Förintelsen, xasuuqii ku dhawaad lix milyan oo Yuhuud ah loo geystey intii lagu jiray Dagaalkii Labaad ee Adduunka, ayaa ah habka ugu xun/adag ee lagu muujiyo Antisemitism.
Dadka reer Roma iyo kooxo kale ayaa la dabagelayay oo la laayay
Isla xilligii uu Förintelsen socday ayay Naasiyiintu xasuuq u geysteen qowmiyadda dadka reer Roma. Kooxaha kale ayaa sidoo kale ay Naasiyiintu u geysteen kadeedis/dhibaatay iyo xadgudub. Waxay ahaayeen kooxo ay Naasiyiintu u arkaayeen inay yihiin kuwo khatar bulshada ku ah ama aan qiimo badan laheyn. Waxay noqon kareysay mucaaridiinta siyaasada, danbiilayasha ama dadka maskax ahaan naafada ah.